गोपालमान ट्वाँ ! कसो रामचन्द्र ? देउवा हैरान ! देख्नेलाई लाज !
काठमाडौं, २ माघ । गोपालमान ट्वाँ ! सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन धनगढी पुगेका शेरबहादुर देउवालाई अहिलेसम्म राजीनामा किन नदिएको भनेर धनगढीका पत्रकारले गत शुक्रबार एयरपोर्टमै र्याखर्याख्ती पारे ।
पत्रकारको कुरो सुनेर देउवा एक क्षण अकमकिए । त्यसैबीच एक अर्का पत्रकारले थपे–कि एमालेबिनाको सरकार पनि बन्न सक्छ ? यो प्रश्न सुनेर देउवाले हाँस्दै भने–यो नेपाल हो यहाँ जे पनि हुन सक्छ । तर यो विषयमा अहिले म बोल्दिनँ । देउवाको उत्तर सुनेर उनीसँगै बसेका शिक्षमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ भने ट्वाँ परे ।
कसो रामचन्द्र ?
यो अजब नेपालमा गजब गजबको कुरो हुन्छ । डा.गोविन्द केसीलाई रातारात प्रहरीले पक्राउ गरेर थुन्यो । यो देशका प्रधानमन्त्री स्वयं गृह मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् । उनले भोलिपल्ट भने–गोविन्द केसीलाई पक्रेको कुरा मलाई थाहा छैन ।
पर्सिपल्ट त्यही पार्टीका गगन थापा डा.केसीको रिहाई माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिए । गोविन्द केसी पक्राउ परेको कुरो गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुनु, त्यही पार्टीका सांसद आन्दोलनमा उत्रनु के गाईजात्रा हो, कांग्रेसको ? यसरी त न पार्टी चल्छ, न त सरकार नै कसो, रामचन्द्र पौडेलज्यू ? बोल्नु पर्यो नि ।
देउवा हैरान !
मधेसका लागि लडेको दाबी गर्ने मधेसवादी नेताहरु प्रदेश प्रमुखमा आफ्ना नातागोता नियुक्त गर्न हानथाप गरेको घटनाले मधेसी जनता लज्जित भएका छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फोन गरेर देउवालाई प्रदेश नं. २ को प्रमुखमा आफ्ना सम्धी उमाकान्त झालाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् तर त्यही पार्टीका अर्धा नेता उपेन्द्र यादवले भने रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
मधेसीको यस्तो ताल देखेर देउवा हैरान भएका छन् । देउवा निकटहरुले भने राजपाले भने जस्तो होइन, विमलेन्द्र निधिले भनेको मानिसलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रको यस्तो चाल देखेर हिजोआज बालकृष्ण खाण पनि दिक्क भा’छन् रे । कसो, प्रकाशशरण महतज्यू ?
देख्नेलाई लाज !
कांग्रेसले चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेहोस भएका छन् । बेहोसीमा उनले कहिले के कुरा गर्छन् त कहिले क ? देउवाको ताल देखेर स्वयं कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुसमेत लाजले भुतुक्कै बनेका छन्, खबर दृष्टिको बक्रदृष्टिमा उल्लेख छ ।
धनगढी पुगेर देउवा भने–कसलाई सत्ता छोड्नु ? कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छैन । सारा संसारले बुझेको कुरो देउवाले बुझ पचाउँदा... देख्नेलाई लाज जस्तो भएको छ ।
फोरम-नेकपा सम्वन्धमा खटपट
‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन जारी भएको ७ बर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा अझै आएनन्
बुढानीलकण्ठ मन्दिरका मठाधीश निगमानन्द महाराजले गरेको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन माग गर्दा उल्टै समिति खारेज गरेको आरोप
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठपर्वको समापन गर्दै (भिडियो सहित)
शुद्धता, सद्भाव र आस्थाको पर्व छठ आज : हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
निर्मलाका बाबु आजदेखि धर्ना बस्दै
काङ्ग्रेसमा एकता र मेलमिलाप आवश्यक–सभापति देउवा